Candy · Mey 2011 · Global Voices teny Malagasy
Candy · Mey, 2011
Lahatsoratra farany an'i Candy tamin'ny Mey, 2011
Irana: Voasambotra ny “mpanala devolin'i Ahmadinejad”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana11 Mey 2011
Voasambotra ny olona 25 mpiara-miasa akaiky sy mpanohana ny Filohan'i Irana Mahmoud Ahmadinejad sy ny Lehiben'ny Etamazaoro Esfandyar Rahim Mashai, ary araka ny voalaza dia anisan'izany ny "mpanala devoly" na "mpisambotra djinn" Abbas Ghaffari. Maro no maminavina fa noho ny fifamaliana teo amin'i Ahmadinejad sy ny filoha ambonin'ny Repoblika Silamo...
Ejipta: Manampy ny governemanta mitsikilo ny mafana fo ireo orinasa
Ejipta09 Mey 2011
Herinandro vitsivitsy lasa izay rehefa tsy namaly teo noho eo ny fangatahan'ny vahoaka ny manampahefàna, maro ireo Ejiptiana no nanalokaloka tany amin'ny foiben'ny SSI mba hiaro ireo porofo miampanga ny biraon'ny SSI (anisan'izany ny fitaovana fampijaliana sy antontan-taratasy). Anisan'ireo antontan-taratasy ireo ny fifandraisana teo amin'ireo fikambanan'ny SSI mifandraika amin'ny fanasivanana,...
Eoropa Afovoany & Atsinanana04 Mey 2011
Yekaterina Aksyonova, mpamorona ny gov-gov.ru, iray amin'ireo blaogy mpanome vaovao lehibe indrindra momba ny governemanta amin'ny aterineto any Rosia, dia nihaona vao haingana tamin'ny Global Voices tao amin'ny BarCamp an'i Azia afovoany, ary namaly fanontaniana maromaro momba ny anjara asan'ny teknolojia sy ny fangaraharàna.
Tontolo Arabo: “Ny 2011 dia ho taona voamarika anatin'ny tantara”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana03 Mey 2011
Mety hoe vao volana May izao fa maro ny zava-nitranga nandritra ny volana vitsivitsy teo amin'ny tontolo Arabo. Taorian'ny vaovao omaly momba ny namonoan'ny Amerikana an'i Osama Bin Laden tany Pakistana, Saodiana atidoha nikotrika ny fampihorohoroana, mandinika ny taona nodiavina ireo mpandefa tweets.
Malaizia: Toby fanazarana “hanampiana” ny zazalahy manao toetram-bavy
Azia Atsinanana02 Mey 2011
Noho ny fahazarany somary manao fombam-behivavy, nalefa tany amin'ny toby fanazarana ny tovolahy mpianatra 66 avy amin'ny fanjakan'i Terengganu mba "hanampiana azy ireo hitondra tena amin'ny fomba mety". Nozarazarain'izany olana izany ny tontolon'ny blaogy any Malaizia.